Isku dhex-yaac, cabsi iyo waraaqo is burinaya | KEYDMEDIA ONLINE
Isku dhex-yaac, cabsi iyo waraaqo is burinaya
Dadka u dhuunduleela siyaasadda ayaa Wasiir Xasan Xuseen Xaaji, ku dhaliilay waraaqaha kala u jeeddada ah ee sida cad uu uga dhex muuqdo is beddelka muwqifkiisa ee uu soo saaaray saacado gudahood.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Xil-gaarsiina Xasan Xuseen Xaaji, ayaa saacado gudahood iska soo daba saaray waraaqo kala u jeeddo ah kuwaas oo abuuray hadal heyn xooggan, xilli la warinayo in ay jirto kala aragti duwanaan ka aloosan xaafiisyada Rooble iyo Farmaajo.
Waraaqda sumaddeedu tahay [WG/XW/00/74/21] oo xaafiiska Wasiirka Gaashaandhigga ka soo baxday 21/12/2021, ayaa Taliyaha Ciidanka XDS, General Odawaa Yuusuf Raage, lagu amray inuu baaritaan degdeg ah ku sameyo eedda uu taliyaha Ciidanka Badda u jeediyay RW Rooble, oo ah inuu boobay dhul dan guud ah, waxaana Odawaa la faray inuu qaado tallaabo waafaqsan sharuucda dalka iyo xeerarka Ciidanka XDS.
“Waxaa warbaahinta lagu faafiyay muuqaalo la sheegay in laga soo duubay Taliyaha Ciidanka Badda, kaasoo uu ku eedeynaayo Madaxda Qaranka oo uu Ra'iisul Wasaaraha ka mid yahay in ay ku lug leeyahiin dhulka Ciidanka Badda oo loo adeegsaday arrimo shaqsiyadeed. Haddaba, waxaa lagu farayaa Taliye in aad baaritaan degdeg ah ku sameysid arrintan sidoo kalena aad ka qaadatid tallaabo waafaqsan sharuucda Dalka iyo xeerarka Ciidanka Xoogga Dalka”. Ayuu Wasiir Xasan Xuseen Xaaji.
Isla taariikhdaas, waraaq uu soo saaray Taliyaha Ciidanka XD, General Odawaa, ayaa shan sarkaal, loo magacaabay Guddi Baaritaan ku sameeya dhacdada ku cad warqadda kor ku xusan, waxaana saraakiisha ka mid ah S/guuto Maxamed Tahliil Biixi, oo Farmaajo u qaabilsan Ciidanka Lugta.
Waraaqda uu qoray Odawaa, oo lagu sheegay in ay soo baxday 21/12/2021, hayeeshee, waxa ay bannaanka timid oo baraha bulshada lagu baahiyay xalay 22-kii bisha, wax yar kadib markii uu soo dhamaaday kulan uu Farmaajo la lahaa dhamaan saraakiisha ciidanka, marka laga reebo taliyaha Booliska Xijaar.
Daqiiqado kooban kadib, markii la baahiyay waraaqdan, xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa si deg deg ah dhamaan Xubnaha Golaha Wasiirrada, ku war-galiyay in si dhameystiran u soo xaadiraan kulanka khamiista, kaas oo hore aan qorshaha ugu jirin maadaama lagu jiro dhamaadka sanadka iyo caqa badaha COVID-19.
Sida ay xogo hoose sheegeen, xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada oo u janjeera dhanka Farmaajo iyo Taliyaha ciidamada Badda Soomaaliya, Cabdixamiid Maxamed Dirir, ayaa la filayay in ay jagooyinkooda waayaan, ka hor inta uusan mowqifkiisa baddelin Wasiirka Gaashaandhigga.
Wasiir Xasan Xuseen Xaaji, wuxuu mar kale soo saaray waraaq sumaddeedu tahay WG/XW/00174-1/21, taas oo uu ku sheegay in waraaqdii uu hore u soo saaray ee ku socota Odawaa u jeedkeedu ahaa in kaliya baaritaan lagu sameeyo Taliyaha Ciidanka Badda.
“Waxaan dadwaynaha Soomaaliyeed u cadadnaynaa in Warqadda uu soo saaray Wasiirka Gaashaandhiga kuna taariikhaysnayd 21-12-2021 ay ujeedadeedu ahayd in baaris rasmi ah lagu sameeyo hadalkii gafka ahaa ee kasoo baxay Sarkaal ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo si ka baxsan nidaamka iyo Anshaxa ugu gafay Ra'iisulwasaaraha Qaranka”. Ayuu mar kale yiri Xasan.
Wuxuu sii raaciyay in baaristu ay qusayso oo kaliya Cabdixamiid Maxamed Dirir shacabkuna la socon doonaan gunaanadka falka uu ku kacay Sarkaalka.
Hayeeshee, dadka u dhuunduleela siyaasadda ayaa wasiirka ku dhaliilay waraaqaha kala u jeedada ah ee sida cad uu uga dhex muuqdo is beddelka muwqifkiisa.
Wasiirka Gaashaandhigga, wuxuu waraaqda hore ku amray Odawaa inuu tallaabo ka qaado eedda loo jeediyay Rooble, halka uu waraaqda labaad ku sheegay in tii hore ku wajahneed baaritaanka kaliya taliyaha ciidanka badda.